कोरोना महामारीका बीच ५ वटा टोलीलाई आरोहण अनुमति, उठ्यो २३ लाख बढी रोयल्टी – Mission Khabar
कोरोना महामारीका बीच ५ वटा टोलीलाई आरोहण अनुमति, उठ्यो २३ लाख बढी रोयल्टी
मिसन खबर १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०६:०५
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बीचमा खुलेको पर्वतारोहण सिजनका दौरान आइतबारसम्म कुल ५ वटा टोलीले आरोहण अनुमति पाएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यसबीचमा दुई टोलीका २४ जनाले हिमाल आरोहण गरिसकेका छन् । भने बाँकी ३ टोली आरोहणको तयारीमा छन् ।
यसरी हिमाल चढ्नेमा बहराइनका राजकुमारसहित रोयल फोर्सको टोली छ । यो टोलीले मनास्लु (८१६३ मि.)को हिमाल चढेर स्वदेश फर्किसकेको छ । अर्को ६ जना समूहको एक नेपाली टोलीले वरुत्से हिमाल आरोहण गरिसकेको छ । यसअवधिमा कतारका राजकुमारसहितको ६ जनाको टोली अमादब्लम (६८१४मि.) हिमाल चढ्न आएको छ । ग्लाल्जेन पीक (६१५१ मि.) र हिमलुङ हिमाल (७१२६ मिं) आरोहण गर्न दुई समूहले अनुमति लिएका छन् । ग्याल्जेन पीका चढ्न अनुमति लिएको तीन जनाको टोली नेपाली र हिमलुङको अनुमति लिएको ५ जनाको टोली विदेशी रहेको बताइएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म जारी ५ वटा आरोहण अनुमतिबाट २३ लाख ६० हजार २ सय ८२ रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ ।
सबैभन्दा बढी १९ लाख ६ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ बहराइनका राजकुमारसहितको १८ जनाको टोलीले तिरेको छ । कतारका राजकुमार शेख मोहमद विन अब्दुल्लासहितको टोलीले २ लाख ८२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । बाँकी अन्य टोलीबाट उठेको छ । शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणको शुल्क वसन्त ऋतुको तुलनामा ५० प्रतिशत कम छ ।